Shuruudo la Xiriira Masaafurinta Khasabka ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Shuruudo la Xiriira Masaafurinta Khasabka ah
La daabacay måndag 17 oktober 2011 kl 10.28
Hayadda Frontex ee howsheedu tahay ilaalinta xuduudaha waddammada ku midoobey ururka Midowga Yurub ee EU-da ayaa ku shuruudeeyey dalkan Iswiidhen inuu furfuro dul-kala-socodka dadyoowga loo soo diiday dacwadoodii magangelyo-doon ee khasabka lagu masaafurinayo.
Hayadda ayaa sidoo kale soo jeedisay iney goob joog ka ahaadaan dadyow ka madax-bannaan goobaha lagu hayo shakhsiga khasabka lagu masaafurinayo iyo sidoo kale dayuuradda lagu qaadayaba. Maanta ayay xaaladdu tahay mid qarsoodiya kolka cid khasab dalkan looga masaafurinayo.
Illaa iyo hadda ayaa la fuliyey sagaal duulimaad ee masaafurin khasab ah dayuuraddiibana ey la socdeen isku celcelin 30-meeyo ciraaqiyiin ah, iyadoona ay hayadda Frontex miisaaniyad gelisay mid ka mid ah duulimaadyadaa. Sidoo kale wuxuu dalkan Iswiidhen si wada-jir ah gacan ugla geeystay hayadda Frontex 14 kale ee masaafurin khasab ah ee ku wajahnaa dalalka Naayjeeriya iyo Koosovo.